DC Spinning Cookware Aluminum Circles, Alloy 1050 3003 Aluminum Discs - Zhejiang Shuanglin Jiate Metal Technology Co., Ltd
Ny alimanakan'i Shuanglin Jiate dia manamboatra faribolana avo lenta amin'ny varotra sy ny hateviny isan-karazany, mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny mpanjifa. Ireo dia ampiasaina amin'ny famokarana fitaovana an-trano toy ny fitaovana fanenomana, tsy fisakafoanana ary fitaovana fambolena hafa. Ireto ambany ireto ireo refy sy fepetra izay manomeza faribolana
Ny taona 10 amin'ny famokarana ny aliminiara dia manome ny kalitao sy ny fahatsapana ny serivisy ho an'ny mpanjifa, ny kodiaran-alim-borona dia mety amin'ny kalitaon'ny alikaola ary ny fampiasana ny famokarana.
Aluminio circle Specification:
1050 3003 DVD fanontam-pirinty kasety
1. Main ho an'ny Cookware nampiasaina
2. Temper: O (malemy), 1 / 4 Hard H14, H24, sns.
4. Ampahany: 50mm-1250
5. Fahadiovana: 99.5% aluminium
Model No .: 1050 1060 1100 3003 3105
Fampiharana: fitaovana fitaterana, varavarankely & varavarankely, akora, hafa, ho an'ny kafe sy fitaovana
Fanamarinana: ISO9001, ASTM, JIS, GB, EN, ASTMB
Ny ekipa manam-pahaizana matihanina manamboatra sy manome ny kalitao Aluminium avo lenta. Ireo faribolana ireo dia ampiasaina amin'ny fanaovana fitaovana sy singa hafa satria ireo dia tsy misy vokany sy matanjaka. Manamboatra ireo faribolana ireo isika amin'ny fampiasana aluminium ala voajanahary avo lenta, azo avy amin'ireo mpivarotra amidy eny an-tsena. Ny fitaovana sy milina farany dia ampiasain'ny matihanina manam-pahaizana hanamboatra ireo faribolana ireo. Rehefa mitadidy ny filàna samihafa amin'ny mpanjifantsika isika, dia manolotra ny faribolana Aluminium amin'ny endriny maro.
Aluminio circle cookware 1050, kodiarana Aluminium ho an'ny cookwares, kodiarana Aluminium ho an'ny pans, Kitapo fidiovana aluminium